आईपीएलमा मयंकको पहिलो शतक छायामा ! राजस्थानको किर्तिमानी जित - नेपालबहस
आईपीएलमा मयंकको पहिलो शतक छायामा ! राजस्थानको किर्तिमानी जित
| ०:२९:१२ मा प्रकाशित
१२ असोज, एजेन्सी । आईपीएल क्रिकेटमा राजस्थान रोयल्सले किर्तिमानी दोस्रो जित हात पारेको छ । पञ्जाबले दिएको २ सय २४ रनको विशाल लक्ष्य खेल सकिन ३ बल बाँकी छदै ६ विकेट गुमाएर पूरा गरेपछि राजस्थानले ४ विकेटको किर्तिमानी जित हात पारेको हो । यो खेलमा ४४९ रन बनेको थियो । लक्ष्य पछ््याएको राजस्थानले २ सय २६ रन बनाउन सफल भयो ।
राजस्थानलाई जिताउन सञ्जु सामसनले सर्वाधिक ८५ रन बनाए । ४२ बल खेलेका उनले ४ चौका र ७ छक्का हाने । शुरुमै बलटर आउट भएपछि दबाबमा परेको राजस्थानलाई जितका लागि आधार तयार पार्ने काम सामसनले बनाएका हुन् ।
यस्तै कप्तान स्टिभ स्मिथले ५०, राहुल ट्वाइटाले ५३, जोफ्रा आर्चरले १३ र रबिन उथप्पाले ९ रन बनाए । सामसन आउट भएपछि लगभग हारको नजिक पुगेको राजस्थानका लागि राहुलले एकै ओभरमा ३० रन बनाएर टिमलाई जित नजिक पुर्याएका थिए ।
रविन उथप्पा आउट भएपछि क्रिजमा आएका जोफ्रा आर्चरले ३ बलमा दुई छक्कासहित १३ रन जोडे । अन्तिम ओभरमा २ रन चाहिएका बेला क्रिजमा आएका टोम कुरानले चौका हानेर टिमलाई जित दिलाएका थिए । पञ्जाबका मोहम्मद शामीले ३ विकेट लिएपनि टिमलाई जिताउन सकेनन् ।
त्यसअघि दुबईमा टस हारेर पहिले व्याटिङ गरेको पञ्जाबले मयंक अग्रवालको शतकमा २ सय २३ रनको विशाल योगफल बनाएको थियो । मयंकले ५० बलमा १० चौका र ७ छक्का प्रहार गरेर १ सय ६ रन बनाए । यस्तै कप्तान लोकेश राहुलले ६९ र निकोलस पुरनले २५ रन बनाए ।
तर हारसँगै मयंकको पहिलो शतक भने छायामा परेको छ । राजस्थानले भने सर्वाधिक ठूलो लक्ष्य पछ्याएर खेल जित्ने किर्तिमान बनाएको छ । जितसँगै राजस्थानले २ खेलबाट ४ अंक बटुल्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ ।
समान अंक भएपनि रनरेटका आधारमा दिल्ली पहिलो स्थानमा छ । यसपटक दिल्ली र राजस्थान आईपीएल जित्ने लक्ष्यका साथमा मैदानमा दमदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
आइपिएलमा दिल्लीको लगातार तेस्रो हार ३ मिनेट पहिले
भारतमा लुटपाट गरेको आरोपमा पाँच नेपाली पक्राउ १७ घण्टा पहिले
चुलो बाल्न बालुवा गिट्टीमा आश्रित २३ घण्टा पहिले
पत्रकार भूपराज बस्याललाई पितृ शोक १७ घण्टा पहिले
कोरोना संक्रमणबाट संविधानसभाका पूर्वसदस्य चौधरीको मृत्यु १६ घण्टा पहिले
गहवामाईको पूजा गर्न लागेको लाम ७ दिन पहिले
कराँचीमा बम बिस्फोटन, ३ जनाको मृत्यु ७ दिन पहिले
चितवनमा १९ दिनकी सुत्केरी संक्रमित महिलाकाे मृत्यु १४ घण्टा पहिले
गड्डाचौकीमा बेहोशावस्थामा भेटिएका दुई जनालाई आफन्तको जिम्मा ४ दिन पहिले
पोखरामा दैनिक दुई सय प्याराग्लाइडिङ ! ७ दिन पहिले
आज थप ५७० कोरोना संक्रमित थपिए १५ घण्टा पहिले
झरीले गोठ भत्किँदा एक जनाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
आज ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस हुँदै ४ हप्ता पहिले
कर्णाली नेकपामा किचलो, शाह प्रमुख सचेतकबाट पदमुक्त २ हप्ता पहिले
विश्व मानसिक दिवस २०२०:- मानसिक स्वास्थ्यमा प्रर्याप्त लगानी र व्यापक पहुँच अहिलेको आवश्यकता ३ हप्ता पहिले
गण्डकी मेडिकल कलेजमा प्रभु बैंकको काउण्टर सञ्चालन ३ हप्ता पहिले
कोरोनासँग जुध्दै आर्थिक क्रियाकलापलाई अघि बढाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन २ हप्ता पहिले
राजेश हमाललाई ईशाई मिशिनरीको पाउ मोल्न किन परेको ? २ हप्ता पहिले
विद्युत वितरण प्रणाली स्तरोन्नति र विस्तारमा साढे १२ अर्ब ऋण ८ महिना पहिले
मुद्दामा संलग्न रही फरार रहेका तीन अभियुक्त पक्राउ ३ महिना पहिले
‘वैकल्पिक सिकाइका लागि विद्यालयलाई सूचना प्रविधिमा बजेट अपुग’ ५ महिना पहिले